August 2014 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 2:00:00 PM 0
Than Toe Aung at 1:06:00 PM 0
ကွန်ပျူတာတွေဟာ အသုံးပြုတာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ လေးလံလာတဲ့ နာမည်ဆိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူ တာကို ပြန်လည် လျှင်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်းများရှိပါတယ်။
Settingsပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်ကနေ RAMထပ်စိုက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများအထိ လူတိုင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်လမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူ တာလေးလံလာလို့ အသစ် မဝယ်ခင်မှာ ဒီနည်းလမ်းများကို စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ရှင်းလင်းရေး Program များကို မကြာခဏ အသုံးပြုပါ။
CCleaner ဟာ Applicationsများစွာရဲ့ Temporary Filesများနဲ့ Cachesများကို ရှာဖွေ ရှင်းလင်းပေးနိုင်တဲ့ အလွန်ကောင်းတဲ့ Appဖြစ်ပါတယ်။ CCleanerကို ဒီလင့် မှာအခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
မလိုအပ်တဲ့ Visual Effectsများနဲ့ Animationsများကို ဖယ်ရှားပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ Visual Effectများနဲ့ Animationများဟာ သင့်ကွန်ပျူတာကို မျက်စိပသာဒ ဖြစ်စေပေမယ့် လေးလံစေပါတယ်။
Windows 7မှာ စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်များစွာကို စားသုံးနေတဲ့ Aero Themeကို Disableလုပ်သင့်ပါတယ်။ Desktopပေါ်မှာ Right Clickနှိပ်ပြီး Personalizeကို နှိပ်ပါ။ Windows Color ကို နှိပ်ပြီး Enable Transparency မှာ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးပါ။
Antivirus Softwareကို Updateပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုပါ။
Virusesများနဲ့ Malwareများဟာ သင့်ကွန်ပျူ တာကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ လေးလံစေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဒါကို တားဆီးဖို့ကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ ပြုလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ သင်ဟာ Virusတွေလို စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ Notificationများကို အဆက်မပြတ်ပြသနေတဲ့ အခမဲ့ Antivirusများကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် Uninstallလုပ်ပြီး ကြော်ညာများ ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိတဲ့ Microsoft Security Essentials Antivirus Softwareကို ပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်။ Windows 8ကနေ စပြီး Microsoft Security Essentilsဟာ နဂိုပါရှိလာပါတယ်။ သူ့အရင် Windows OSများမှာတော့ MSEကို သုံးချင်ရင် ဒီလင့်ကနေ ရယူပါ။
နေ့စဉ် Quick Scanလုပ်ဖို့နဲ့ အပတ်စဉ် Full Scanလုပ်ဖို့ Scheduleလုပ်ထားရင် အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေမှာပါ။
အလုပ်များစွာ တစ်ပြိုင်နက် လုပ်နိုင်ဖို့ RAMများ ထပ်ဖြည့်ပါ။
RAM or Random Access Memoryဟာ ဈေးသက်သာပြီး လေးလံနေတဲ့ သင့်ကွန်ပျူတာကို အသစ်အတိုင်း ပြန်လည် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကွန်ပျူတာဟာ ဘယ်လို RAM အမျိုးအစားလိုအပ်သလဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ Neweggမှ Memory Finder ဆိုတဲ့ Toolကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင် ကွန်ပျူတာမှာ RAMကို တပ်ဆင်နိုင်သလို ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူကို Motherboardမှာ တပ်ဆင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အလွန်လွယ်ကူပြီး ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ DIY or Do It Your Self နည်းလမ်းပါ။
Solid State Drive(SSD)ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုပါ။
သင့်ကွန်ပျူတာကို လျှင်မြန်စေဖို့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းက Hard Driveကို အဆင့်မြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျ Hard Drive(HDD)နဲ့ အသစ်ဖြစ်တဲ့ Solid State Drive (SSD)ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သမားရိုးကျ Hard Driveများဟာ ဈေးသက်သာပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပါရှိပါတယ်။ SSDတွေမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ မပါဘဲ Flash Memoryကို အခြေပြုထားပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခုအချိန်မှာတော့ ပိုမို ဈေးသက်သာလာပါပြီ။ SSDကို သုံးရင် ကွန်ပျူတာဖွင့်ရင် လျှင်မြန်စေသလို Programသုံးရာမှာလည်း လျှင်မြန်စေမှာပါ။
ကွန်ပျူတာ စဖွင့်ချိန်မှာ Run တဲ့ Appsများကို လျှော့ချပါ။
ကွန်ပျူ တာ စဖွင့်ချိန်မှာ အချိန်အတော်ကြာ စောင့်နေရတာက စိတ်ညစ်စရာပါ။ အဲဒီအတွက် ကွန်ပျူတာ စဖွင့်ချိန်မှာ အလိုအလျှောက် Runတဲ့ Appsများကို လျှော့ချသင့်ပါတယ်။
အဲဒီ Appsများကို တွေ့နိုင်ဖို့ Start Menuကို နှိပ်ပြီး Msconfigကို ရှာပြီး ဖွင့်ပါ။ Startup Tabမှာ ကွန်ပျူတာ စဖွင့်ချိန်မှာ မလိုအပ်တဲ့ Appsများကို Uncheckလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ လိုအပ်တဲ့ Programလားဆိုတာ Googleကနေ အရင် မလေ့လာဘဲ Deleteပြုလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်များကို အလွန်အကျွံစားသုံးတဲ့ Processများကို ရှာဖွေပါ။
သင့်ကွန်ပျူ တာမှာ Processများစွာ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ လည်ပတ်နေပါတယ်။ အဲဒီ Processများထဲမှာ မလိုအပ်ဘဲ ကွန်ပျူတာကို လေးလံစေတဲ့ Processများလည်း ပါရှိပါတယ်။
Windowsမှာ Taskbarကို Right Clickနှိပ်ပြီး Start Task Managerကို နှိပ်ပါ။ RAM သို့မဟုတ် Processing Power ကို လွန်စွာ စားသုံးနေတဲ့ သင်မကြားဖူးတဲ့ Processများကို တွေ့ရင် Google မှာလေ့လာပါ။ မတွေ့ရင်တော့ မလိုအပ်တဲ့ Processဖြစ်နိုင်ပြီး End Processကို နှိပ်ပြီး ရပ်တန့်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
Viruses or Malware တိုက်ခိုက်ခံရရင် ဝင်းဒိုးကို Fresh Installပြုလုပ်ပါ။
Virusesများကို အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ Antivirusများနဲ့ သတ်ပစ်နိုင်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ဝင်းဒိုးကို Fresh Installလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သင့် Windows Operating Systemကို Fresh Reinstallပြုလုပ်ခြင်းဟာ Virusကို လုံးဝသတ်ပစ်နိုင်တဲ့ အာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ပြန်လည် အင်စတော မလုပ်ခင်မှာ အရေးကြီး ဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းထားဖို့လိုပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် Windows Installation Disk ဒါမှမဟုတ် USB Stickကို သင့်ကွန်ပျူတာမှာ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ။ ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ။ မျက်နှာပြင်မှာ ပြသတဲ့ လမ်းညွှန်မှုများအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
အင်တာနက် ဘရောက်စာ လေးလံနေရင် Cacheများကို ရှင်းလင်းပါ။
သင့်ကွန်ပျူတာမှာ အင်တာနက် ကြည့်တဲ့ အခါမှာ လေးလံနေရင်တော့ ပြဿ နာ ဟာ သင့်ကွန်ပျူတာ မဟုတ်ဘဲ ဘရောက်စာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘရောက်စာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် နည်းလမ်းတွေက မတူညီကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့် ဘရောက်စာရဲ့ Settingsထဲသွားပြီး Historyကနေ Cacheများကို ရှင်းလင်းပါ။
သင့်ကွန်ပျူတာရဲ့ Search Indexကို Refresh ပြုလုပ်ပါ။
ဒီနည်းလမ်းက Hard Diskတစ်ခုလုံးကို Indexပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကွန်ပြုတာမှာ ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ အလွန်လျှင်မြန်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ Hard Diskများမှာ Indexပြုလုပ်ရင် အချိန်အတော်ကြာမြင့်ပေမယ့် ထိုက်တန်တဲ့ ရလဒ်ကို ရစေမှာပါ။
Windowsမှာ နဂိုပါတဲ့ Disk Defragmenter Appကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ Defragmentation ပြုလုပ်ဖို့ Scheduleပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
သင့်ကွန်ပျူ တာကို Restart မကြာခဏလုပ်ပါ။
သင့်ကွန်ပျူ တာကို ဖွင့်ထားစဉ်မှာ Programsများဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ Memoryကို ပိုမိုစားသုံးလာပါတယ်။ သင့်ကွန်ပျူ တာကို မကြာခဏပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ခြင်းဖြင့် နောက်ကွယ်မှာ Runနေတဲ့ Program or Appsများကြောင့် Memoryကုန်ဆုံးမှုများကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ အရေးကြီးတဲ့ Updateများကို မကြာခဏ အင်စတော လုပ်ပေးပါ။
ref:MMICT အဆင်ပြေရင်အောက်ပါကြော်ငြာကိုတစ်ချက်ကလစ်ခဲ့ပါ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 12:55:00 PM 0
Huawei G610-U00 VideoCall & Myanmar Font Flashtool Firmware
Than Toe Aung at 5:24:00 PM 3
Huawei G610 အတွက် Video Call ရော မြန်မာစာဖောင့်ရော ပါတဲ့ Flash
tool Firmware လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Firmware လေးကိုတော့ S4 Rom ကို
ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ S4 Rom ကိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိ
ရဲ့ 610 ဖုန်းဟာ cwm တင်ထားတာတောင်မှ ပေးပြီးတော့ သွင်းမရတာတွေ
ရှိပါတယ်။ ဒီ Flashtool Firmware လေးကိုတင်လိုက်ရင် Gesture sensing
တွေလည်း အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ Gallery ထဲက ဓါတ်ပုံတွေကိုလည်း လက်နဲ့
ရွှေ့စရာ မလိုဘဲ လေပေါ်ကနေ ကျော်လို့ရခြင်း ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ရင်လည်း
ကင်မရာကို နှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ လက်ကလေးနဲ့ အချက်ပြလိုက်တာနဲ့ အော်တို
ရိုက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ music ဖွင့်ရင်းနဲ့ နောက်တစ်ပုဒ်ကျော်
ချင်ရင်လည်း next ကို နှိပ်စရာမလိုဘဲ လက်ကလေး ဝှေ့ယမ်းလိုက်တာနဲ့
အော်တို ကျော်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ error ကတော့ internal memory
0B ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီ Flashtool Firmware ကို
တင်လိုက်ရင် internal memory အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ sd card ထပ်စိုက်
မှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ ဒီ Flashtool Firmware တင်ပြီးလို့ မကြိုက်ရင်လည်း
official firmware ပြန်ရေးလို့ရပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ဘာ error မှ မရှိ
ပါဘူး။ Ooredoo sim card ရယ် GSM/WCDMA Sim Card ရယ် နှစ်ခုစလုံး
ထည့်ထားပြီး 3G ကွန်ယက် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်သုံးချင်သူများအတွက်
Download Here >> http://www.mediafire.com/download/88zzd1bc35l0enc/G610VideoCallFlashtoolFirmware.zip << credit-Aung Min Han
Firmware i-Mobile Phone Application
Than Toe Aung at 4:16:00 PM 0
MTK 6577 338MB SP Flash Tool နဲ့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် i-mobile i-STYLE Q3i ကိုတင်လိုက်လို့လိုင်းပျောက်သွားတယ်ဆိုရင် IMEI ပြန်ရေးပေးရမှာပါ Download အဆင်ပြေရင်အောက်ပါကြော်ငြာကိုတစ်ချက်ကလစ်ခဲ့ပါ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Than Toe Aung at 1:03:00 PM 0
Android Application Livewallpaper
mmitdeveloper at 11:17:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။Miley Cyrusကိုတော့သိကြတယ်မို့လား။ကျနော်က တော့
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 6:53:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 6:34:00 PM 0
Than Toe Aung at 12:58:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 12:10:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 11:59:00 AM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 1:22:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 8:22:00 AM 0
ဆရာဦးမောင်နိုင် ၏ ဖုန်းစက်ပြင်မှတ်တမ်းစာအုပ်များစုစည်းမှု ( မြန်မာလို - EBook )
Myanmar IT Helper at 8:42:00 PM 0
Android ဖုန်းစက်ပြုပြင်ပညာရပ်များကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ..စက်ပြုပြင်နည်းလေ့လာနေသူများအတွက် ဆရာဦးမောင်နိုင် ၏ ဖုန်းစက်ပြင်မှတ်တမ်းစာအုပ်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာလိုသူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ။
From => Solidfiles ၊ Miloshare
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 12:12:00 PM 0
Than Toe Aung at 12:04:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 1:37:00 PM 0
Android Application Wallpaper
Sexy Go Premium Wallpaper
mmitdeveloper at 7:48:00 AM 0
Fire Lion Livewallpaper
mmitdeveloper at 7:47:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။Livewallpaperတွေမတင် ရတာကြာလို့တင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီLWPကိုတော့အထူးမ ပြောတော့ပါဘူး။ပုံကိုကြည့်
တာနဲ့တင် သိနိုင် ပါတယ်။ဒါလေးကကျနော့်ကိုOnlineက နေAndroidရေးနည်းအ ကြောင်းတွေသင် ပြ ပေးတဲ့ဆရာPixelရဲ့လက် ရာလေးဖြစ်ပါတယ်။
Android Application Photo Editor
Ultimate Photo Collage
mmitdeveloper at 7:46:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ဓါတ်ပုံတွေကိုဘောင် တွေထဲမှာပုံစံအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ချင် တဲ့
မိတ်ဆွေများတွက်Photo collage apkလေးတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။
BLOG Blog/Website ဆိုင်ရာစာအုပ်
ဘလော့မှာ တင်သမျှ Facebook တွင်အော်တိုရောက်အောင် ရှယ်နည်း
Unknown at 11:07:00 PM 3
အားလုံးမင်္ဂလာပါ..... ကျွန်တော် ဘလော့ပညာတွေကို မရေးဖြစ်ခဲ့တာ တော် တော် ကြာခဲ့ပါပြီ ဒါကလည်း တော်တော်လေးစုံစုံလင်လင် တင်ထားပြီးဖြစ်နေတော့ မရေးဖြစ်ခြင်းပါ...သည်နေ့တော့ ဘလော့ကာတော်တော် များများအထက်ခဲ တွေ့နေတဲ့ ဘလော့ကနေ Facebook Page တွေ မိမိ Timeline တွေ ပေါ်အော်တို ရှယ်တဲ့နည်းလေးပါဘဲ.... အရင်တင်ထားတာ ရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သိပ်မရှင်းလင်းကြတော့..အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြတယ်... ဒါကြောင့် ခုဘဲ ထပြီးရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်...
အောက်မှာ ပုံလေးတွေ နှင့်တစ်ကွ သေခြာ ရှင်းပြထားတာ မို့ တဆင့်ချင်း သွားလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါပြီနော်.... လေ့လာလိုက်ကြစို့လားနော်.............
ပထမဆုံးအနေနဲ့... သည်လင့်ကို ( http://www.networkedblogs.com/dashboard ) ကလစ်ပြီးဝင်လိုက်ပါနော်..
အဲမှာဘဲ အပေါ်ကပြထားတဲ့အတိုင်း Sing Up လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...နော်..နောက် ၀င်တဲ့အခါမှာ Facebook Log In ဆိုတာကလစ်ပြီးဝင် လိုက်ပါ...အဲအတွက် Facebook ကိုမိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ဘောက်ဆာ မှာ ၀င်ထားရင်ကောင်းပါတယ်...မ၀င်ရသေးပါက ခု အကောင့် ၀င်တဲ့ခါ ၀င်ပေးလိုက်ပါနော်..အိုကေ ဆက်သွားကြမယ်...
အောက်က အဆင့်တွေတော့ လမ်းပြထားတဲ့အတိုင်းပုံကြည့် သွားလိုက်ပါ ဘာမှ ဖြည့်စရာမလိုတာမို့ ပုံကိုသာ ကြည့် သွားလိုက်ပါနော်...
အိုကေ အဆင့် နံပါတ် ( ၅ ) မှာတော့ Yes Add My Blog Now ဆိုတာကလစ်လိုက်ပါ.။
အဆင့် ( ၆ ) မှာလည်း ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ကလစ်ပြီးဆက်သွားလိုက်ပါနော်...။
သည်အဆင့် နံပါတ် ( ၈ ) မှာတော့ ဖြည့်စရာတွေပါလာပါပြီ.... အပေါ်ကနေ အောက် တဆင့်ဆီ
နောက်...Feed Link ဆိုတာ မိမိဘလော့ကနေ ယူထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ယူနည်းကို အောက်မှာ ပြထားပါ့မယ်....
နောက်....Language မှာ English ကိုပေါ့နော်
အမှန်ခြစ်နေရာလေးပေး Next နဲ့ သွားလိုက်ပါတော့နော်....
ဘလော့ကနေ Feed Link ယူနည်း
မိမိတို့ ဘလော့ရဲ့ လိပ်စာဘား ရှေ့က logo icon လေးကို ကလ်စလိုက်ပါ နောက်
ကျလာတဲ့ ဘောက်က More Information ဆိုတာကလစ်လိုက်ပါ။
အဲလို ဘော်ကလေးကျလာတဲ့အခါ အပေါ်က Feeds ဆိုတာကိုကလစ်ပါ.. ကျလာတဲ့ လင့် ၂ ခုထဲက ကြိုက်တာကို ကလ်စလိုက်ပါ... ဘောက်ဆာမှာ ရှိနေတဲ့ လင့်ကို ယူလိုက်ပါနော်..အဲတာ Feed Link ပါဘဲ...အဆင်ပြေပါတယ်နော်... အပေါ်ကအဆက် ကိုဆက်သွားမယ်နော်..
အိုခေ သည်လိုလေးကျလာတာနဲ့ Yes ကိုပေးလိုက်ပါနော်...အိုကေ... အဆင့်တွေပြီးတာနဲ့
မိမိ တို့ Email မှာ အတည်ပြု ခိုင်းပါလိမ့်မယ်နော်...ဒါဆို စောစောက လုပ်ထားတဲ့ မေးထဲကိုဝ်ငလိုက်ပါ
စာရောက်နေမယ် ဗျာ... ဖွင့်ပြီး Comfirm လုပ်ပေးလိုက်ယုံပါဘဲနော်..အဲမှာ ဘဲ ကျွန်တော် တို့... ချိတ်ဆက်ဖို့ အသင့်အေနအထားဖြစ်ပြီမို့ စကြမယ် ဘလော့ပေါ်က ဟာတွေ Facebook မှာ ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ ရှယ်ကြမယ်နော်....အောက်မှာ
အကောင့် အတည်ရတာနဲ့ Blogger Dashboard ဆိုတာကိုကလ်စလိုက်ပါ....
အဲနောက် မယ်တော့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Syndication ဆိုတာကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ...
အိုကေ မိမိတို့ ချိတ်လိုတဲ့ ရှယ်လိုတဲ့ ဘလော့ကို ရွေးခိုင်းပါမယ်.. မိမိမှာ အက်မင်ဘလော့များစွာ ရှိနေပါက အဲထဲကနေမှ ရွေးပေးလိုက်ပါ မိမိ ယခုလုပ်လိုသော ဆိုဒ်ကိုပေါ့
ရွေးလိုက်တာနဲ့ အောက်မှာ Facebook ပုံလေးနဲ့ Add Facebook Target ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပါ။
ဒါဆို မိမိ Facebook ဆိုင်ရာတွေ ကျ လာမှာဖြစ်ပါတယ်...ကိုယ်က ချိတ်ထားလိုသော နေရာနောက်ကို Add ကလစ်ပေးလိုက်ယုံပါဘဲနော်...အဲတာနဲ့တင် မိမိဘလော့မှာ တင်သမျှ ပို့စ်တိုင်း Add ထားသော နေရာများကို...အော်တို ရောက်နေ တက်နေပါမည်....
မှတ်ချက် ။ ။ Facebook Page တွေရှယ်လိုပါက ၄င်းပေ့မှာ အက်မင် ဖြစ်နေဖို့ လိုပါမည်..
အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်.... မရှင်းတာရှိပါက မေးနိုင်ပါတယ် ချက်ဘောက်မှာ စာချန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်နော်.... ဘလော့ခရီးသည်
တို့မှာ လည်ရောက်ဝင်ပါတ် လိုတာယူဆောင်နိုင်ပါတယ်.....
Mobile Codes Phone Application
China Android Phone ထဲက တရုတ်ဝေါဟာရများကို အင်္ဂလိပ်လို သိအောင်..
Maung Pauk at 1:36:00 PM 0
China Android Phone ကိုင်ပီး တရုတ်စာ မဖတ် တတ် သူများ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်
ဒါလေးကိုတော့ MMSD Group မှ Member Thaw Thaw Npt က စုစည်းပေးထားတာပါ။
China Android Phone ကိုင်ပီး တရုတ်စာ မဖတ် တတ် သူများ
–apply sdcard:update.zip 使用SD卡
–wipe data/factory reset 清空data分
–wipe cache partition 清空cache分区
–install zip from sdcard 从SDcard选
–choose zip from sdcard 从SD卡选
–toggle signature verification 切换签
–toggle script asserts 切换升级脚本
–backup and restore 备份和恢复
–mounts and storage 挂载和存储
–mount /system 挂载/system分区
–mount /data 挂载/data分区（数据分
–mount /cache 挂载/cache分区（缓存
–mount /sd-ext 挂载/sd-ext分区
–format sd-ext 格式化内存卡SD
–mount USB storage 挂载SD卡为U盘
–Key Test 键位测试
–power off 关机
–touch calibration 触屏校准
tex ဖိုင်လေးဒေါင်း https://www.box.com/shared/jegvamwxgo031h9chlmi
Thanks to MMSD and Nyi Nyi Aung
Maung Pauk at 11:05:00 AM 0